Masaajidka ugu weyn qaarada Yurub oo laga dhisayo Barcelona | Somaliska
Amiirka wadanka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa ku dhawaaqay in uu bixinayo 2.2€ bilyan oo euro si dhisme qadiimi ah oo ku yaala magaalada Barcelona, Spain oo lagu qaban jiray tartamada dagaalka dibiyada loogu badalo masaajidka ugu weyn qaarada Yurub.
Qorshaha masaajidka oo noqonaya kan sadexaad ee ugu weyn caalamka ee ku xiga Maka iyo Madiina ayaa yeelanaya hool ay kumanaan qof ku tukan karaan, iskuul ay ilaa 300 arday Quraanka ku bartaan iyo masxaf lagu soo bandhigo taariikhda Islaamka. Masjidka ayaa yeelanaya minaarat cabirkeedu yahay 300m.
Dhismaha la doonayo in masaajidka laga dhigo ayaa ah mid qadiimi ah oo la dhisay sanadkii 1914 iyadoo lagu qaban jiray tartamada dagaalka dibiyada iyo bandhiga heesaha. Ka dib sanadkii 2010 oo ay dowlada gobolka Catalonia ay mamnuucday tartamada dibiyada ayaan u jeedo loo hayn dhismaha iyadoo loo badalay masxaf.
Warar ku dhow shirkada iska leh dhismaha oo lagu magacaabo Balaña Group ayaa sheegaya in ay aqbaleen lacagta uu gaaray amiirka iyadoo go’aanka ugu dambeeya laga sugayo maamulka dowlada Barcelona. Magaalada Barcelona oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn qaarada Yurub isla markaana ay ku noolyihiin Muslimiin badan ayaan lahayn masaajid weyn.
Waa maxay sababta ururka cunsuriga SD ee Soomaalida neceb ugu ololaynayo aqoonsiga Somaliland?
Ilaahey ayaa mahad dhamaanteed u sugnaatay.